आर्थिक – Page5– Fewa Times
आज १६ सय जनाले जिते कोरोना-मयूर यातायातले थाल्यो उपत्यकामा सेवा-सङ्खुवासभा सिसुवा पहिरामा बेपत्ता भएका ११ को खोजी जारी-आज ८२ जनामा कोरोना पुष्टि-आज ७० कोरोना संक्रमित थपिए-अझै तीन दिनसम्म देशभर वर्षाको सम्भावना-म्याग्दीमा पहिरो : बेपत्ता १० जनाको शव फेला-रुपन्देहीमा जङ्गली च्याउ खाँदा चार बिरामी-उपत्यकामा थप ४२ जनामा कोरोना पुष्टि-रुकुम पश्चिममा पहिरोले घर पुर्दा आमाछोराको मृत्यु, छोरी घाइते
काठमाडौं – आज सुनको मूल्य एकै दिन तोलामा एक हजार रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला ७४ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुगेको छ । सुनको यो मूल्य अहिलेसम्मकै बढी हो । विहिबार सुन प्रतितोला ७३ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसअघि गएको भदौ १८ गते सुनको भाउ तोलाको ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसयता घटेर......
काठमाडौँ – एनसेलले सरकारलाई ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिरेको छ । एनसेलले एभरेस्ट बैंकमार्फत नेपाल सरकारको राजश्व खातामा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको हो । सेयर स्वामित्व खरिद बिक्री प्रकरणमा निर्धारण भएको २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख लाभकरमध्ये एनसेलले पहिलो किस्ताको रुपमा ४ अर्ब ५० करोड......
सुनको मूल्य बढ्यो, तोलामा कति पुग्यो ? थाहा पाउनुहोस्
काठमाडौँ – मंगलबार सुनको मूल्य बढेको छ । सोमबार तोलामा ७३ हजार ३०० मा कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलबार ७३ हजार ५०० मा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै चाँदी ७३ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार......
विदेशी कम्पनीहरुले ३ वर्षमा लगे ८१ अर्ब २८ करोड लाभाशं
काठमाडौँ – नेपालमा लगानी गरेका विदेशी कम्पनीहरुले विगत ३ वर्षमा आर्जित नाफाबाट ८१ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लाभाशं लगेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ मा करीब ९७ वटा कम्पनीले यसरी लाभाशं रकम लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति पाएका थिए । केन्द्रीय बैंकको तथ्याकंअनुसार यी ३ वर्षमा......
सुनको मुल्य तोलाको ५ सयले बढ्यो
काठमाडौं – शुक्रबार छापावाल सुनको मुल्य प्रतितोला ७३ हजार ३ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यो विहिबारको भन्दा ५ सयले बढी हो । विहिबार सुन प्रतितोला ७२ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै तेजावी सुन ७३ हजारमा कारोबार भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार चाँदीको मुल्य आज ८९० रुपैयाँ......
अण्डा बेचेर मासिक ४ लाख आम्दानी
बागलुङ – बागलुङ नगरपालिका–१३ पैयुँपाटा, डाँडाथरस्थित ‘बलेवा बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक कृषि एन्ड पोल्ट्री फार्म उद्योग’मा अहिले चार हजार ६०० ‘लेयर्स’ जातका कुखुरा छन् । कुखुराले दैनिक चार हजार अण्डा दिन्छ । एउटा अण्डाको मुल्य रु दश पर्छ । एक पेटी अण्डा रु दुई हजार १०० मा बिक्री हुन्छ । “महिनामा चार......
५०० रुपैयाँले बढ्यो सुनको भाउ, कति पुग्यो तोलामा ? थाहा पाउनुहोस्
काठमाडौँ – आज आइतबार सुनको मूल्य तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको छ । शुक्रबार तोलामा ७० हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आइतबार बढेर ७१ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको हो । यस्तै तेजावी सुन ७१ हजारमा कारोबार भएको छ । यस्तै चाँदी भने रु ५ बढेर ८४५ रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी......
काठमाडौं – सिभिल बैंक पनि मर्जरमा जाने भएको छ । मर्जरमा जानका लागि आगामी पुस ६ गते हुने नवौं वार्षिक साधारणसभामा विशेष प्रस्ताव पेश हुने भएको छ । सिभिल र प्रभु बैंकबीच मर्जरमा जाने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यस्तै अन्य बैंकसंग पनि छलफल भइरहेको सिभिले जानकारी दिएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको......
काठमाडौँ – उपत्यकावासीको प्याजको माग केही दिनदेखि चिनियाँ प्याजले धान्न थालेको छ । भारतबाट प्याज आउन रोकिएपछि चिनियाँ प्याज भित्रिएर उपत्यकावासीको माग धानेको हो । गएको असोजमै भारतले विदेशमा प्याज निर्यातमा रोक लगाउने नीति लिएसँगै भारतीय प्याज व्यापारीहरूले गैरकानुनी बाटोबाट भित्र्याउँदै आएका......
विश्व बैंकको प्रक्षेपणमा सरकारको अस*न्तुष्टि
काठमाडौँ – विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेसँगै सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । बैंकले बिहीबार ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत मात्रै रहने बताएको छ । गत वर्ष विश्व बैंकले चालू......